War-saxaafadeed - Apicmo cdmo Warshadaha
06 / 05 / 2019Posted by: APICMOCategory: Aqoonta caafimaadka0 jecel yahay
Raadi doorka GM1 ee jirdhiska maskaxda, xayawaanka ka hortagga gaboobaha, iyo saameynta daaweynta ee nidaamka dhexe iyo kuwa dareenka.
Waa maxay Isku-Bixinta Dhibaatada (Monoxide)
Monocotamexosylganglioside sodium waa nafaqada neurotrophic, kaas oo soo gaabin GM1. Continue Reading
Pyridine waa aasaaska heterosyclic aasaasiga ah ee nooca yar. Pyridine waxaa laga soocaa bakteerka iyada oo loo beddelayo kooxda CH-da N-atom. Qaab dhismeedka Pyridine wuxuu u dhigmaa qaab dhismeedka baasiin, maxaa yeelay waxay ku xirantahay bedelida kooxda CH. N. Farqiga ugu weyn waxaa ka mid ah:
Qalabka heterocyclic, oo sidoo kale loo yaqaano qaab dhisma wuxuu aasaas u yahay maaddada ku jirta aaladaha laba waxyaalood oo kala duwan sida xubno ka mid ah giraangiisa. Xeryaha Heterocyclic waxaa laga yaabaa inay noqdaan kuwa ugu kala duwan iyo tirada ugu badan ee qoyska qoyska.
Qaybta spiro waa hab dabiici ah kaas oo laba siddo baaskiil ah lagu dhejiyo hal unug. Dabeecadda, dhismayaasha siddeedda ah waxay noqon karaan kuwo isku mid ah ama kuwo ka duwan, iyo in atomku isku xiro labada waji waxa loo yaqaan spiroatom (atom spiral), caadi ahaan waa darajo 4 (oo sidoo kale loo yaqaan carbon carbon spiral), sidoo kale waa silikoon, fosfooraska, ama arsenic
2- Chloro-5 methylpyrimidine waxay leedahay muuqaal budo ah oo cad oo huruud ah heerkulka qolka. Qaarkood waxay qeexi doonaan hooska midabka sida cadaan-cad. Ma laha ur iyo miisaanka molecular ee 128.56 Grams per mole. Qaaciddada kiimikada waxaa lagu qeexay sida C5H5CIN2 iyo Nidaamka Nidaamka Hirgelinta Nidaamka Hirgelinta Nidaamka Hirgelinta (SMILES) sida CC1 = CN = C (CL) N = C1. Xaruntu waxay leedahay dhibco kala duwan oo u dhaxaysa 89-92 degrees centigrade, iyo dhibic karkaraya 239
07 / 19 / 2018Posted by: APICMOCategory: Waxyaabaha CMO1 Comment0 jecel yahay
07 / 18 / 2018Posted by: APICMOCategory: Waxyaabaha CMONo Comments0 jecel yahay
Waxaa ka soo qalinjabiyey Waaxda sayniska kiimikada, Jaamacadda Stanford, Jaamacadda Stanford
07 / 18 / 2018Posted by: APICMOCategory: Aqoonta caafimaadka1 Comment0 jecel yahay
Xirfadaha ugu fiican ee gobolka of synthesis farshaxan ee xeryahooda heterocyclic. Isticmaalidda isku dhafka reagentiyada iyo khibradda gacanta ee kuyeelka loo yaqaan "benzonitrile", phenol, naphthol, coumarin, thiocoumarin, quinoline, quinozoline, pyrimidine, pyridine, indole, indazole, Imidazole iyo benzimidazole oo la jaray heterocycles.